छुसक पछि कोरियामा फैलियो को’रोना, आज एकैदिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्र-मित ! - Thulo khabar
छुसक पछि कोरियामा फैलियो को’रोना, आज एकैदिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्र-मित !
सोउल : दक्षिण कोरियाको ठूलो चाड छुसकपछि यहाँ को’रोना भा’इरस सं’क्रमण फै’लिएको छ। शनिवार मात्रै कोरियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सं’क्रमि’त थपिएका छन। कोरियामा पहिलोपटक दैनिक सं’क्रमि’तको संख्या ३ हजार नाघेको छ।
छुसकको लामो विदामा मानिसहरुको चहलपहल बढेसँगै कोरोना फै’लिएको बताइएको छ। कोरियामा आज लगातार दुई दिन दैनिक सं’क्रमि’त संख्याले उच्च रेकर्ड बनाएको हो। शनिवार देशभर ३ हजार २ सय ७३ जना सं’क्रमि’त थपिएका छन जसमध्ये ३ हजार २ सय ४५ जना स्थानिय संक्रमित हुन भने बाँकी वाहिरबाट कोरिया प्रवेश गरेकाहरुमा देखिएको सं’क्रम’ण हो।
यो सँगै कोरियामा कुल कोरोना सं’क्रमि’तहरुको संख्या २ लाख ९८ हजार ४ सय २ पुगेको कोरिया रो’ग नि’यन्त्र’ण तथा रो’कथाम एजेन्सी केडिसिएले जानकारी दिएको छ।
शनिवारको सं’क्रम’ण अघिल्लो दिन अर्थात शुक्रवारको भन्दा ८ सय ४२ ले धेरै हो। शुक्रबार कोरियामा २ हजार ४ सय ३१ जनामा सं’क्रम’ण पुष्टि भएको थियो।
गत सोमबार देखि वुधवारसम्म चलेको कोरियाको महान चाड छुसकका अवसरमा देशभरी १० लाखभन्दा मानिसहरु आफ्नो घर गएका र फेरि आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किएका कारण चहल पहल बढेसँगै को’रोना फै’लिएको हो।
कोरियामा गत ८१ दिनदेखि दैनिक सं’क्रमि’तको संख्या १ हजारभन्दा माथि रहेको छ। डेल्टा भे’रियन्टका कारण कोरियामा सं’क्रम’ण फै’लिएको बताइएको छ। छुसकका कारण जमघट गरेकाहरु करिब १० लाख जनाले टेष्ट गर्न
बाँकी रहेकाले को’रोना सं’क्रमि’त अझै बढ्न सक्ने कोरियाका स्वा’स्थ अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन। कोरियन सरकारले अक्टोबरको अन्तिमतिरबाट को’रोना सँगसँगै दैनिक जिवनयापन सन्चालन गर्ने निती तय गरिने बताएको भएतापनि अहिले देखिएको तिब्र फै’लाव’टले यस नितिलाई पनि अ’सर पार्न सक्ने बिज्ञहरुले बताइरहेका छन। -इपिएस साथी बाट